साढे दुई वर्षमा ४५ हजारलाई सेवा दियौं : पन्त – United Reference Laboratory (URL) Pvt. Ltd.
साढे दुई वर्षमा ४५ हजारलाई सेवा दियौं : पन्त
अन्य क्षेत्रजस्तै स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि नयाँ प्रविधि, थप अस्पताल, उल्लेख्य जनशक्ति जस्ता परिवर्तन भएका छन्। राजधानी काठमाडौंमा मात्रै होइन, देशका अन्य सहरमा समेत ठूला अस्पताल, ल्याब र मेडिकल कलेजहरू बनिरहेका छन्। यसै क्रममा साढे दुई वर्ष पहिले पोखराको सभागृहचोक, गिरी कम्प्लेक्समा युनाइटेड रेफरेन्स ल्याबोरेटरी प्रालि(युआरएल) स्थापना भयो। विश्वकै सर्वाेत्कृष्ट प्रविधि, दक्ष जनशक्ति र कुशल व्यवस्थापकले सञ्चालन गरेको युआरएल छोटै समयमा नेपालको अग्रणी र लोकप्रिय प्रयोगशाला बन्न सफल भएको छ। युआरएलको स्थापना, सेवा, प्रविधि र प्रयोगशाला क्षेत्रको अवस्थाबारे प्रवन्ध निर्देशक ठाकुरप्रसाद पन्तसँग तालबाराही खबरले गरेको कुराकानी यहाँ प्रस्तुत छ :
पोखरामा युआरएलको स्थापना किन भयो ?
पोखरामा विद्यमान सामान्य प्रकारका ल्याबमा हुन नसकेका रक्त परीक्षणहरू विदेश पठाउनुपर्ने वाध्यताबाट सेवाग्राहीलाई मुक्त गराउन युआरएलको स्थापना भएको हो। विशेष प्रकारका परीक्षणहरू विदेश र राजधानी पठाउनुपर्ने र बीचमा तीन–चार बिचौलियाले कमिसन खाँदा सेवाग्राही निकै उच्च मूल्य तिर्न बाध्य थिए। समयमै रक्त परीक्षणको रिपोर्ट नआउँदा उपचार प्रभावित हुने, कतिपयमा ज्यानको जोखिमसम्म बढ्ने र तापक्रम तलमाथि हुँदा सही रिपार्ट नआउने जटिलताबीच यो क्षेत्र चलिरहेको थियो। यस्ता जोखिमलाई हटाएर उपचारमा सहजता ल्याउन युआरएलको स्थापना गरेका हौं।
पोखराबाट विदेश पठाउनुपर्ने परीक्षण कत्तिको रोकिएका छन् त ?
पोखराबाट करिब ८० प्रतिशत विदेश पठाउनुपर्ने रक्त परीक्षण युआरएलको स्थापनापछि रोकिएका छन्। हामी क्रमिक रुपमा नयाँ प्रविधि र नयाँ परीक्षण थप गर्दै यो क्षेत्रलाई प्रयोगशालाको क्षेत्रमा आत्मनिर्भर बनाउने योजनामा छौं।
युआरएलमा छुट दिँदाको शुल्क अन्य ल्याबमा नदिँदाको भन्दा महङ्गो छ भन्ने आरोप छ नि ?
हामीले प्रयोग गरेको प्रविधि, हाम्रो जनशक्ति, रसायन र गुणस्तरको हिसाबले हाम्रो शुल्क महङ्गो होइन। हाम्रै प्रविधि प्रयोग गरेका राजधानीका प्रयोगशालाभन्दा हाम्रो शुल्क २० देखि ३० प्रतिशत सस्तो छ। साधारण प्रयोगशालाको तुलनामा विश्वकै अत्याधुनिक प्रयोगशालाको शुल्क केही महङ्गो हुनु स्वभाविकै हो।
युआरएलले किन आक्रामक प्रचारप्रचार गरिरहेको छ ?
पोखरामा हामी नितान्त नयाँ प्रकारको ल्याब सञ्चालन गरिरहेका छौं। चिकित्सकको सिफारिसमा परीक्षण गरी रोग निदान गर्ने परिपाटी बसेको समाजमा सर्वसाधारणमा आफै प्रयोगशालासम्म आएर परीक्षण गरी सम्बन्धित विशेषज्ञकहाँ जाने संस्कार बसाउनु सजिलो कुरा होइन। हाम्रो प्रविधि, यहाँ हुने परीक्षण र गुणस्तरलाई सर्वसाधारण, चिकित्सक र सरोकारवालासम्म पु¥याउन प्रचारप्रसारको विकल्प छैन। त्यसैले निश्चित समयका लागि हामीले प्रचारप्रसारमा ध्यान दिएका हौं।
युआरएलले विदेश र राजधानी पठाउनुपर्ने कुन–कुन परीक्षण पोखरामा नै गर्दै आएको छ ?
युआरएलले नेपालमै सबैभन्दा धेरै प्रकारका रक्त परीक्षण गर्ने गरेको छ। हार्ट फेलियर हुने सम्भावनासम्बन्धी परीक्षण एन्टी प्रो–बिएनपी, फोक्सोको क्यान्सरसम्बन्धी परीक्षण साइप्रा २२.१, थाइराइडको विशेष परीक्षण एन्टी टिएसएचआर, एलजीसम्बन्धी परीक्षण हामीले पोखरामै गर्दै आएका छौ। यसबाट यो क्षेत्रका बिरामी र चिकित्सकले समेत सहज महसुस गरेका छन्। युआरएलमा राजधानीलगायत विभिन्न सहरबाट समेत रक्त परीक्षणका नमुना आउने गरेका छन्।
२०७२ लाई मधुमेह वर्षपछि २०७३ लाई मृगौला वर्षका रुपमा किन मनाइँदै छ ?
२०७२ साललाई मधुमेह वर्षका रुपमा मनाउँदै हामीले विभिन्न संघ, संस्थासँगको सहकार्यमा वर्षभरमा २१ निःशुल्क मधुमेह परीक्षण शिविर आयोजना ग¥यौं। ती शिविरमा १० हजार दुई सय ८६ जनाको निःशुल्क परीक्षण गरिएकोमा करिब १२ प्रतिशत सुगरका नयाँ बिरामी फेला परे। सुगर धेरै रोगको मुहान भएकाले त्यसको न्यूनीकरणका लागि निःशुल्क शिविर र सचेतना कार्यक्रम गरेका थियौं।
२०७३ साललाई ‘मृगौला वर्ष’ का रुपमा मनाउँदै यो वर्ष निःशुल्क मृगौला परीक्षण र सचेतना कार्यक्रम विभिन्न स्थानमा आयोजना गरिनेछ। अहिले विकराल समस्याका रुपमा देखा परेको मृगौलाको समस्या समाधानमा यसले सहयोग गर्नेछ भन्ने हामीले ठानेका छौं। शिविरमा अन्य सबै प्रकारका रक्त परीक्षणमा समेत ५० प्रतिशत छुट दिइने हुँदा सर्वसाधारण यसबाट समेत उल्लेख्य रुपमा लाभान्वित हुनेछन्।
धेरै अस्पताल र ल्याबले आफन्त र पहुँचवाला केहीलाई छुट दिने र नियमानुसार दिनुपर्ने छुट नदिइ सेवाग्राहीको फर्जी नामसमेत पेश गर्ने गरेको आरोप छ। युआरएलको अवस्था के छ ?
हामी यही पक्षमा अरुभन्दा फरक छौं। जनस्वास्थ्य कार्यालय, स्वास्थ्य संस्था, स्थानीय निकाय आदिको सिफारिसमा हामीले सेवाग्राहीलाई उल्लेख्य छुटदेखि निःशुल्कसम्म सेवा दिएका छौं। यसको रेकर्ड पनि राखेका छौं र सम्बन्धित निकायमा समेत बुझाएका छौं। सेवाग्राहीको विवरण पनि राखेका छौं। तपाईजस्तै पत्रकारहरूले सत्यतथ्य बुझेर समाचार सम्प्रेषण गरिदिनु भए हामी अझ आभारी हुनेछौं।
युआरएलमा प्रयोग भएको प्रविधि र सेवा कुन तवरले उत्कृष्ट छ भन्ने यहाँहरूको दाबी छ ?
पोखरामा डेढ दर्जन बढी अस्पताल छन्। साधारण प्रयोगशाला बग्रेल्ती छन् भने अन्य केही रेफरेन्स ल्याब पनि छन्। हामी आपत्कालीन अवस्थामा एक घण्टामै र सामान्य अवस्थामा बिहान र बेलुका गरी दुई सिफ्टमा रिपोर्ट दिन्छौं। आपत्कालीन अवस्थाको परीक्षणमा पनि अतिरिक्त शुल्क लिँदैनौं।
युआरएल सबै दृष्टिकोणले यस क्षेत्रको उत्कृष्ट ल्याब हो। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको प्रविधि, दक्ष जनशक्ति, उच्च गुणस्तरको रसायन, सहरको मुख्य स्थानमा कार्यालय, कर्मचारीलाई दिइने सुविधा सबै क्षेत्रमा हामी अगाडि छौं।
जापान, अमेरिका र जर्मनका वैज्ञानिकले निर्माण गरेको रोस कम्पनीको कोबास इफोरवानवान प्रविधिमाफत् इकिलिया मेथडबाट हामीकहाँ परीक्षण गरिन्छ।
चिकित्सकको सिफारिसमा परीक्षण गरिने प्रयोगशालाबीच करोडौं लगानीमा रेफरेन्स ल्याब चलाएर सेवाग्राही आफै परीक्षण गर्न आउने परिपाटी विकास गर्दै हुनुहुन्छ। कस्ता छन् चुनौतीहरू ?
चिकित्सकको सल्लाहमा रोग लागेपछि इन्भेष्टिगेसन गरी डाइग्नोसिस गर्ने पुरानो चलन चलिरहेकोमा स्क्रेनिङ परीक्षण गर्ने परिपाटी पनि सुरु भएको छ। युआरएल स्थापनाअघि राजधानी र छिमेकी भारतमा गएर आफै स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने सेवाग्राहीलाई अहिले सजिलो भएको छ। त्यहाँको गुणस्तर र सेवा स्थानीय ठाउँमा नै पाइने र यहाँको परीक्षणलाई राजधानी र विदेशका अस्पतालहरूले समेत मान्यता दिँदा उपचारमा सहजता आएको छ।
युआरएलका भावी योजना चाँहि के छन् ?
अढाइ वर्षको अवधिमा हामीले ४५ हजार बढीलाई सेवा दिइसकेका छौं। संसारका ३० हजार बढी प्रकारका रक्त परीक्षण हुन्छन् भने भारतमा पनि नौ हजार बढी प्रकारका रक्त परीक्षण सम्भव छन्। नेपालमा भने तीन सय ५० बढी प्रकारका रक्त परीक्षण मात्र हुने गर्छ। हामी अन्तर्राष्ट्रिय प्रविधिमा थप जटिल प्रकार रक्त परीक्षण थप्दै जाने सोचमा छौं।
हामीकहाँ सम्बिन्धित विषय अध्ययन गरेका र अनुभवी कर्मचारी नै छन्। त्यसमा पनि बेलाबेलामा गुणस्तर कायम गर्ने तरिका, नयाँ प्रविधि, नयाँ परीक्षण आदिबारे प्रशिक्षण पनि आयोजना गरिरहेका छौं।
अन्त्यमा, प्रयोगशाला क्षेत्रमा यहाँको करिब दुई दशकको अनुभवचाँहि कस्तो रह्यो ?
रोग निदानको क्षेत्रमा लागेर सर्वसाधारणलाई उचित सल्लाह दिन पाउँदा असाध्य खुसी छु। मैले यो क्षेत्रमा करिब दुई दशक काम गरेँ। अहिले सर्वाेत्कृष्ट प्रविधि, उच्च स्तरको रसायन, अनुभवी लगानीकर्ता, सहरको मुख्य स्थानमा ल्याब सञ्चालन गरी सामाजिक उत्तरदायित्वसमेत बहन गरिरहँदा हामीलाई अलौकिक आनन्द महसुस भइरहेको छ।
स्रोत : तालवाराही खबर साप्ताहिक
Previous Article बाटुलेचौरमा निःशुल्क मृगौला तथा मधुमेह परीक्षण
Next Article विन्ध्यवासिनीमा मधुमेह तथा मृगौला शिविर हुने